Shirkadda lagu haysto isticmaalka sawirrada dadka ee lasoo galiyo baraha bulshada - BBC News Somali
Shirkadda lagu haysto isticmaalka sawirrada dadka ee lasoo galiyo baraha bulshada
Lahaanshaha sawirka LIGHTROCKET
Image caption IBM ayaa bayaan ay soo saartay isku difaacday
IBM oo ah shirkad ka shaqeysa dhinaca Kumbuyuutarrada ayaa lagu eedeeyay in ay sawirro aan wajigooda si fasiix ah loo arkeynin u isticmaashay mashruuc waji aqoonsi ah, iyadoo aan oggolaansho ka heysanin dadka laga arkayo sawirradan.
Shirkaddan ayaa soo baxsatay ku dhawaad hal milyan oo sawir, oo dadka ka muuqda uu wajigooda shucaac ku jiro, waxaana sawirradaas markii ugu horreysay ay ku jireen shirkadda adeegga internet-ka ee Yahoo.
Hase ahaatee, dad badan oo sawirradaas leh waxaa suurta gal ah in aysan ka warqabin qaabka xogtooda lagu helay, sida lagu sheegay warbixin laga sii daayay telefishinka NBC News.
IBM ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay si weyn uga taxadartay ilaalinta shuruucda ku saabsan xogta khaaska ah ee dadka.
Balse koox u doodda xuquuqda dhinaca adeegga internet-ka ee loo yaqaanno digital-ka ayaa sheegtay in ficilka ay IBM sameysay uu yahay mid "Halis weyn" ku ah macluumaadka gaarka ah ee dalka.
"Ma jiro qof ka mid ah dadka aan sawiray oo ka war hayay in sawirkiisa qaabkan loo isticmaali doono", ayuu yidhi sawir qaade la hadlay Telefishinka NBC News.
Sawirrada ay mashruucan u adeegsatay shirkadda IBM ayaa laga diiwaan galiyay hay'adda shatiyada bixisa ee Creative Commons, taasoo sida guud uu micnaheedu yahay in sawirrada sidii la doono loo isticmaali karo, iyadoo ay jiraan shuruudo kooban oo xakameynaya.
Warqad lagu daabacay internet-ka oo ku saabsan howshan ayey cilmi baareyaasha shirkadda IBM si faahfaahsan ugu qeexeen tallaabooyinka loo qaaday qiimeynta wajiyada dadka, waxaana sida ay sheegeen tallaabooyinkaas ka mid ah cabir lagu sameeyay masaafaha ay isku jireen sawirka iyo dadka.
"In badan oo ka mid ah qiimeyntan la sameeyay waxaa lagu qiyaasi karaa wajiyada hore, iyadoo la isticmaalayo 47 qodob oo lagu abaarayo madaxa iyo wajiga", ayaa lagu yiri qoraalka warqadda ay daabaceen cilmi baareyaasha.
'Ha noqon qof cabsi galiye ah'
"Xogta khaaska ah ee dadka uma aragno wax sahlan, aad ayaana uga taxadarnay inaan ilaalinno shuruucda", ayaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay IBM.
Balse qaar ka mid ah hay'adaha u dooda xuquuqda xogaha online-ka ayaa sheegay in IBM ay ku khaldantay isticmaalka sawirrada aan heshiis lagala sameynin dadkii lahaa.
Hay'adda sameysay Xeerka haga isticmaalka sawirrada shucaaca lagu furo ayaa tidhi "Ha noqon qof cabsi galiye ah, nasiib darro IBM way hareermartay sharciga".